कार understate तरिकाहरू को अवलोकन
यस लेखमा एक सिंहावलोकन छ। कार understate रूपमा यो सामान्य विधि छलफल। प्राविधिक केही शब्दमा व्याख्या र वाहन परिमार्जन सम्भव छैन मा विशिष्ट सल्लाह दिनुहोस्।
"विरुद्ध" "को लागि" र: निलम्बन उचाइ परिवर्तन
प्रश्न गर्न: "किन मिसिन हल्कासित नलिनुहोस्" - निम्न जवाफ दिन।
यसलाई चलाउनु कार रेसिंग कम छ छिटो हुनेछ।
मेशिन व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ।
यसलाई सुशील छ।
मिसिन गति र सञ्चालनको सजिलो गर्न दौड कार, यो पर्याप्त रकम हुनेछ हालिदिए गर्न आफ्नै वाहन ल्याए। गुणस्तर संकेतक सुधार महंगा परिमार्जनहरू मात्र सक्षम छ। यो VAZ को मालिक हो उठयो छ असम्भाव्य छ।
सुधार प्रदर्शन ड्राइभिङ? तीव्र लगाउन एक डुम मिसिन - रूसी सडक मा कम निलम्बन संग सवारी। गड्ढे तल छुन र गति मा वृद्धि गर्न योगदान असम्भाव्य छ गर्नेछ।
सौन्दर्य र फेशन ... त्यहाँ तर्क गर्न केही छ। सबैले मिसिन नै डिजाइन छनोट गर्छ, र कम कार भने - सपना, यो तर्क गर्न केही भन्न केही छ।
तरिका खोजिरहेका - हामी understate निर्णय गरे।
विधिहरू न्यानोकीत मिसिन
कार understate तरिकाहरू को एक सिंहावलोकन।
एयर निलम्बन - सबैभन्दा प्रभावकारी विधि, तर पनि सबै भन्दा महंगा।
तपाईं स्वयं अवकास समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ जो एक विशेष निलम्बन, जडान गर्ने। लटकन समावेश विशेष पानीका मुहानहरू एक सेट संलग्न।
निलम्बन सेटअप, पूर्वनिर्मित। वसन्त पहिल्यै माउन्ट।
माथिको विधिहरू लागत आर्थिक चाहिन्छ। कसरी कार understate, जो चाहनुहुन्छ ती पैसा बचत गर्न?
को शक नफेरी छोटो वसन्त सेट गर्नुहोस्।
एक वसन्त क्लिप।
कारण कम टायर गर्न मिसिन को उचाइ कम गर्न र पनि निरन्तर सिमेन्ट एक झोला को ट्रंक मा तिनीहरूलाई बोक्न, हटाउन "अतिरिक्त पानीका मुहानहरू।"
वाहन सुधार मा कसले मदत गर्न सक्छ?
कार कहाँ understate गर्न सक्नुहुन्छ? "आदेश" एक वाहन किन्न सक्षम छन् गर्नेहरूले कार कारखाना विधानसभा understated छन्। कारखाना को संशोधन महंगा छ भन्ने तथ्यलाई - व्याख्या गर्न आवश्यक छैन।
गुणात्मक कम निलम्बन माउन्ट स्टेशन मा हुन सक्छ, त्यहाँ पनि रिसेट र पानीका मुहानहरू वा तिनीहरूको क्रप हुन सक्छ। केही trimming पानीका मुहानहरू र सुधार आफ्नो ग्यारेज संलग्न।
कुनै पनि विशेष सुविधा वा प्रशिक्षण आवश्यकता छैन सवारी उचाइ कम गर्न भारी कुरा को लागि आफ्नो ट्रंक मा लोड।
ठीक कम निलम्बन
तपाईं तल्लो अघि कार निलम्बन, यो मोडेल को डिजाइनर को सबै भन्दा राम्रो संयोजन प्रदान भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ: विश्वसनीयता, सन्तुष्टि, त्यसैले तपाईं ध्यान मिसिन को प्राविधिक विशेषताहरु पढ्न चाहन्छु।
निलम्बन एकाइ को उल्लङ्घन सम्पूर्ण संरचना को विरूपण सक्छ। निलम्बन पुन गर्न निर्णय, यो अतिरिक्त पैसा खर्च गर्न, तर एक विशेष सञ्चालन एकाइ मा स्थापना को लागि प्रदान कारखाना पानीका मुहानहरू साथ सँगै एक किरा किन्न राम्रो छ।
बन्द पनि मार्गदर्शन पढ्ने, आफ्नै पानीका मुहानहरू काटन, तपाईं मनमा राख्न आवश्यक: परिमार्जन समयमा वसन्त संवेदनशीलता र बल परिवर्तन। र पर्याप्त कसरी कठिन भविष्यवाणी गर्न।
तपाईं व्यवसायीक गर्न सक्छन् भने, यो बेवास्ता छैन।
पानीका मुहानहरू Lowering
रूपमा कार understate तरीकाहरु समीक्षा पछि, विकल्प वसन्त छोटा तिर बनेको छ भने, तपाईं वसन्त र पूर्वनिर्मित को छोटो टुक्रा भिन्नता एक विचार गर्नुपर्छ।
जो मा त्यहाँ पानीका मुहानहरू छन् कार को रूप परिवर्तन गर्दैन। तर, वसन्त आफ्नै कट सेट सवारी चलाउँदा, तपाईं असहज महसुस गर्छन्। कार तपाईं आफैलाई लागि महसुस हरेक pothole vibrates। मेशिन धेरै निलम्बन नष्ट गर्दै छन्, तेजी खस्कँदो छ, विकृत शरीर।
कारखाना निलम्बन चिसो coiling द्वारा उच्च तन्यता इस्पात देखि गरे। कारण यसको विशेष बल गर्न तिनीहरूले एउटा छोटो सङ्कुचन स्ट्रोक निलम्बन प्रभाव लोड बुझ्ने र दबाव बिना सञ्चालन। आफ्नो सेवा जीवन पानीका मुहानहरू को खतनाको र कारण आफ्नो स्थापना गर्न मिसिन बिकृति छैन भन्दा ठूलो छ।
वसन्त कारखाना निर्माण तपाईं परिमार्जन गर्न चाहनुहुन्छ कार को ब्रान्ड आधारमा चयन गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले तीव्र गति हस्तक्षेप छैन र इन्धन खपत मा वृद्धि गर्न योगदान छैन छैन भारी वाहन हो र यसको सवारी गुणस्तर सुधार,।
निस्सन्देह, यस्तो वसन्त स्थापना, तपाईं र आघात अवशोषक सोच्न आवश्यक छ। यो मनमोहक छ कि परिमार्जन र व्यवसायीक संलग्न वाहन को पुन उपकरण।
understated मिसिन जस्तै कसैले। फोटो, तिनीहरूले headboard मा राखिएको हो, र सवारी उचाइ आफ्नै कार कम, लाग्छ उच्च मिसिन - unaesthetic। कसैले मिसिन विशेष गरी बन्द-सडक अवस्थामा, न्यानोकीत कि अनावश्यक सोच्छ। उहाँले लिन्छ हरेक निर्णय।
तर यो कार lowering अरूलाई छैन, व्हील पछि बस्न गर्नेहरूलाई एक खतरा हुँदैन भनेर सम्झनु पर्छ। र यो बेलामा मात्र एक परिमार्जन गुणात्मक बनेको छ हुन्छ।
आफ्नो कार लागि अतिरिक्त सुरक्षा - यो हुड लक स्थापना
Carb "Solex 21073": समायोजन विशेषताहरु,
"देवू Matiz" - मालिकको समीक्षा। कार को कमजोर र बलियो पक्ष
ड्रीम व्याख्या: तपाईंको कपाल कसले काट्यो?
कम्पाउन्ड रक र रोमान्स - स्टड संग जूता
सबैभन्दा अजीब फोबियास: सूची र रोचक तथ्यहरू
Phalanges। संरचना र सुविधाहरू
के हावा सफाई छ? म किन कोठामा हावा सफा गर्नुपर्छ?
मार्क फ्रस्ट, "ट्विन Peaks" - गैर-अस्तित्वहीन शहर बारे एक पुस्तक
बिजुली: प्रति सही पढाइ कसरी प्राप्त गर्ने?
BLUBOO नयाँ आश्चर्य: को स्टार्टर पैक BLUBOO S1 वायरलेस ब्लुटुथ-हेडसेट Dacom वायरलेस संगीत सँगै